कम्युनिस्ट सरकारका ऐतिहासिक कार्यभारहरू | Ratopati
कम्युनिस्ट सरकारका ऐतिहासिक कार्यभारहरू
personराजेन्द्र किराँती exploreकाठमाडौं access_timeपुस ८, २०७५ chat_bubble_outline1
वस्तुतः समाज रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई नै कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिन्छ । कम्युनिस्टहरूले वस्तु वा सत्ताको विकास, विनाश र रूपान्तरण ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी प्रस्थापना अनुरूप हुने मान्यता राख्छ । यो रणनीतिक उद्देश्यमा आधारित सङ्गठित र योजनाबद्ध आन्दोलन हो अर्थात यो कार्यनीति र रणनीतिको लामो शृङ्खलाहरू अन्तर्गतको निरन्तर ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । माक्र्सवादले ऐतिहासिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा विस्वास गर्दैन । बरु यसले यो प्रक्रिया कहिले आक्रर्मक कहिले रक्षात्मक, कहिले दृश्य कहिले अदृश्य अनि कहिले व्यक्त कहिले अव्यक्तरूपमा अभिव्यक्त हुनेमा विश्वास गर्छ । यद्यपि रक्षात्मक, अदृश्य र अव्यक्त पक्ष प्रक्रियाको निरन्तरता हो भने आक्रर्मक, दृश्य र व्यक्त पक्ष प्रक्रियाको क्रमभङ्गता हो । निरन्तर सङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियाअन्तर्गतको आक्रमक र रक्षात्मक कार्यनीतिहरूसहितको सचेत र सङ्गठित पहलकदमी नै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो ।
वास्तवमा वस्तु वा सामाजिक सत्ताको रूपान्तरण द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्ने मान्यता नै कम्युनिस्ट अवधारणा हो । यसकारण कम्युनिस्टहरूले हरेक वस्तु, सत्ता, घटना र घटना प्रक्रियाहरूलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा ग्रहण गर्छ । कम्युनिस्टहरूद्वारा सञ्चालित, परिचालित र निर्देशित सबै दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति कार्यक्रमहरू ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गतकै निरन्तर आन्दोलनको हैसियतमा हुनेगर्छ । यो साश्वत नियम हो । अझ जोड र ठोस रूपमा भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट प्रस्थापना वा मूल्यमा आधारित सम्पूर्ण घटना वा घटना प्रक्रिया, क्रियाकलाप र दैनिक कामहरू ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी वा सरकारले अपनाउने दर्शन, विचार, आचर, राजनीति, अर्थतन्त्र, सांस्कृति, जीवनशैली र कार्यशैलीहरूलाई आन्दोलनकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । सङ्गठन विस्तार, प्रशिक्षण, अभियान, योजना र कार्यक्रमहरू सबै आन्दोलनकै प्रक्रिया हो ।
नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक सम्बन्ध विभेदपूर्ण रहेको छ । यस्तो वर्गधरातलमा मूल राजनीतिक प्रवृत्ति कम्युनिस्ट हुनेगर्छ । यसकारण बहुसङ्ख्यक जनता कम्युनिस्टप्रति आकर्षित छन् । परिणामतः हाल नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार छ । नेपाली जनताले औपचारिक, यथास्थिति र औसत सरकारको अनुभव गरिसकेका छन् । औसत सरकार जनताको चाहना र मर्म होइन । यस्तो वस्तुगत धरातलमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सरकारले सम्भावना र चुनौती दुवै बोकेको छ । वस्तुतः यो सरकारले आफ्नो हरेक क्रियाकलापहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउन सफल भयो भने भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ । तर औसत र औपचारिक कर्मकाण्डमा मात्र फस्यो भने भविष्य अन्धकार देखिन्छ । यसकारण यो सरकारसामु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने निम्न बमोजिमको ऐतिहासिक कार्यभारहरू देखिन्छ ।
(क) सैद्धान्तिक कार्यभारः वस्तुतः माक्र्सवादी मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट निर्देशित आन्दोन नै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो । यो निरन्तर सङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियामा आधारित हुन्छ । समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने आन्दोलनको आक्रमक र रक्षात्मक ऐतिहासिक प्रक्रिया नै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो । यसका लागि आम जनतामा समाजवादी चेत, चिन्तन्, मनोविज्ञान, आचार, जीवनशैली र कार्यशैली विकास गराउनुपर्छ । यो आम मनोविज्ञान र आचार रूपान्तरणको प्रक्रिया हो । निरन्तर सङ्घर्षवाट सिद्धान्तको सिर्जनात्मक विकाससँगै समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण नै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो । यसले गलत चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिलाई अभियानकै रूपमा निरुत्साहित गर्छ । यो वर्गसङ्घर्ष वा बलप्रयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यो वर्ग रहेसम्म विभेद रहने अनि विभेद रहेसम्म जारी रहने सङ्क्रर्मणकालीन आन्दोलन हो । यसकारण वस्तुतः यो वर्ग र विभेद उन्मूलनको समग्र ऐतिहासिक प्रक्रियामा आधारित महाआन्दोलन हो । यसकारण सरकारले न्युनतम रूपमा माक्र्सवादी शिक्षाबाट हरेक नागरिकलाई दीक्षित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन माक्र्सवाद र समाजवाद के हो रु यसमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षहरू कसरी परिभाषित गरिन्छ रु यिनीहरूको वर्गचरित्र कस्तो हुन्छ रु कम्युनिस्ट सरकारले हरेक दिनदैन्यको कामकारवाहीहरूलाई पनि निरन्तर आन्दोलनको प्रक्रियासँग जोडेर व्याख्या, विश्लेषण, परिचालन र निर्देशन गर्नुपर्छ । ब्रह्माण्डमा रहेका वस्तु, घटना, घटना प्रक्रिया, प्रकृति र सामाजिक सत्ताको विकास निरन्तर आन्दोलनको प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । वैचारिक स्पष्टतासहितको निरन्तर प्रक्रियाविना समाजवाद सम्भव हुँदैन । समाजवाद आफैमा एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियागत आन्दोलन हो । त्यसैले सरकारका कार्यनीतिहरू यो रणनीतिलाई सहयोगी हुने किसिमको तय गर्नुपर्छ ।
(ख) राजनीतिक कार्यभारः समाजवाद र पुँजीवाद विचको सैद्धान्तिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अन्तरलाई योजनाबद्ध स्कुलिङमार्फत अघि बढाउनुपर्छ । सबै राजनीतिक कार्यहरूलाई आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । राजकीय अङ्गहरू उत्पीडितमैत्री अनि समानता र न्यायको मूल्यमा स्थापित गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समाजवादी आन्दोलन सम्बन्धी अवधारणालाई अघि बढाउनु पर्छ । सबै खाले हेला, होचो, विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा उत्पीडित जनताको अधिनायकत्व र जनवादबीच वैज्ञानिक र वस्तुवादी संयोजन गरिन्छ । सबैभन्दा उत्पीडित र आधारभूत जनतालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिनुपर्छ । पुँजीवादमा जस्तो शक्ति, पैसा र सत्ताको बलमा हावी हुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन, आजैबाट सरकारले समानता र न्यायको सिद्धान्तलाई आममा लागू गर्नुपर्छ । आधारभूत मौलिक अधिकारहरू जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा राज्यको दायित्व बढाउनुपर्छ । यता पुँजीवादमा जस्तो भनसुन, चाप्लुसी, पैरवी र कोेशेली बोकेर नेताकोमा धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । समाजका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गमध्ये पनि सबैभन्दा उत्पीडितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । योजनाबद्धरूपमै शोषक, सुदखोर, तस्कर भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र श्रमचोरलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यो साङ्गोपाङ्गो मानव मुक्तिको ऐतिहासिक महाअभियान हो । समग्र सरकारी नीति साम्यवादी आदर्शतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । अर्थात सरकारले सिङ्गो नेपाली समाजको उन्मुक्तिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
(ग) आर्थिक कार्यभारः नाफा, एकाधिकार र निजत्वमा आधारित दलाल पुँजीलाई क्रमिक रूपमा निरुत्साहित गर्नु यो सरकारको प्राथमिक कार्यभार हो । दलालपुँजीलाई विस्तारै समाजवादी अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धद्वारा विस्थापित गर्दैजानुपर्छ । समग्र अर्थराजनीतिक सम्बन्धमा राजकीय उपस्थिति बढाउनु पर्छ । आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ । श्रमिकलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । ठेकेदारी, विचौलिया र कमिसनतन्त्रलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ । यता निजी स्वामित्वलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै उत्पादनको साधनहरूमा सामाजिक तथा सामूहिक स्वामित्वको पद्धति अपनाउनुपर्छ । आम जनतालाई निजी स्वार्थको मनोविज्ञानबाट सामूहिक स्वामित्वमा क्रमिकरूपमा रूपान्तरण गर्दै लानुपर्छ । मालिक र मजदुर दुवैले उचित हिस्सा पाउँने पद्धति विकास गर्नुपर्छ ।
वस्तुतः दलाल पुँजीलाई विस्तारै कम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई लगानीमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आन्दोलनकै रूपमा सरकारले केही उद्योग कलकारखानाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । दलाल एकाधिकार तथा निगम पुँजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वित्तीय निगम पुँजीलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमुखी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । ठूला दलाल एकाधिकार र निगम पुँजीको राष्ट्रियकरण वा सरकारीकरण गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय पुँजीपति र सरकारी उपस्थिति बढाउनुपर्छ । समाजवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रियासँगै विकसित चेत र मनोविज्ञानसँगै निजत्वलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । राजकीय सामूहिक स्वामित्वको दिशातर्फ समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।
(घ) सांस्कृतिक कार्यभारः वस्तुतः कम्युनिस्ट मूल्यमा आधारित जनसंस्कृति निर्माण गर्नु सरकारको प्रगतिशील सांस्कृतिक कार्यभार हो । छाडा, आडम्मरी र ढोँगी संस्कृति बुर्जुवा उपभोक्तावादी संस्कृति हो । आज हाम्रो समाजमा यही संस्कृतिले नराम्ररी गाँजेको छ । तर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पटक्कै सहयोगी हुँदैन । किनकि विचार, राजनीति र अर्थसम्बन्धको सामाजिक अभिव्यक्ति नै संस्कृति हो । वास्तवमा समाजवादी संस्कृति भनेको कुनै शासक वा उसको भारदारहरूको हितमा नभएर बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गको हितबाट निर्देशित हुन्छ । मूलतः समाजवादी संस्कृति वैज्ञानिक, वस्तुवादी र न्यायपूर्ण हुन्छ । यो वैज्ञानिक तथ्य र यर्थाथताको जगमा हुर्किने गर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा श्रम, उत्पादन र सिर्जनालाई जनसंस्कृति निर्माणको आधार मानिन्छ । कम्युनिस्टहरूले हरेक व्यक्तिलाई उन्नत समाजवादी सांस्कृतिक आदर्श र सभ्यता निर्माणतर्फ दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।
मूलतः वैज्ञानिक संस्कृति समाजवादी आन्दोलनको निरन्तर ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहयोगी हुनुपर्छ । यो समानता र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । बुर्जुवा संस्कृति जस्तो विभिन्न वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रमा झनै विभाजन होइन बृहत् समन्वय, एकता र हितमा केन्द्रित हुन्छ । यसमा सबैखाले हेलाहोचोहरूको अन्त्य गरिन्छ । तसर्थ, यो सरकारले राजा महाराजा र शासकहरूकोे गुणगान र व्यक्तिपूजामा आधारित संस्कृतिलाई निस्तेज गर्दै प्रगतिशील तथा न्यायिक संस्कृतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ । संस्कृतिलाई पनि आन्दोलनसँगै जोडेर रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
(ङ) सामाजिक कार्यभारः सामाजिक कार्यभारलाई पनि आन्दोलनकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । समाजवादको यात्रामा हिँडेको सरकारले सामाजिक कार्यभारलाई उच्च महत्त्व दिनैपर्छ । सबैखाले सामाजिक विकृति, विसङ्गती र कुरीतिहरूलाई तत्काल निस्तेज गर्नुपर्छ । यसमा कुनै पनि खालको सामाजिक शोषण, विभेद र अन्याय हुँदैन । अर्थात सबैखाले सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिन्छ । जनतालाई न्यायपूर्ण ढङ्गले सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनैपर्छ । सबैलाई समान अवसर हुन्छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनामा पनि समान र न्यायपूर्ण विधि र पद्धति लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तै खेलकुद, प्रशासनिक, मनोरञ्जन, विकास–निर्माण र सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको समान सहभागित र अवसरको राजकीय ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आम राजकीय थिति, पद्धति, प्रक्रिया र विधिबाटै यसको हल गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरू तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।
तसर्थ, कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो हरेक क्रियाकलापहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । हरेक कार्यनीतिक कदमहरू समाजवादी रणनीति तर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवालहरूलाई निरन्तर आन्दोलनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अर्थात औपचारिक, औसत र दिनदैन्यको कार्यनीतिहरू निरन्तर आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ । ऐतिहासिक प्रक्रियाको सिलसिलामा गरिने साना तिना कामहरूलाई रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्गतको रक्षात्मक, अदृश्य र अव्यक्त कार्यनीति भनेर प्रशिक्षित र परिभाषित गर्नुपर्छ । सबै घटना, घटना प्रक्रिया र कामहरूलाई पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया भनेर बुझ्नु पर्छ । तब मात्र समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने वस्तुगत धरातल बन्छ ।
Dec. 25, 2018, 10:41 a.m. Tilak Shrestha
Marxism fails even empirically. It fails in all the three levels – economy, politics, philosophy. Economy: North Korea – no freedom, per capita $ 2,000 South Korea – democracy, per capita $ 40,000 Politics: Dictatorship of proletariat is anti-thesis to democracy. Philosophy: Marxists like to say the mouthful ‘Dialectic materialism \_ Dwandhatmak bhautikabad’, do not they? It is about fools fooling themselves first, and then trying to fool others. The original meaning of ‘Dialectic’ is that the discourse between different views concludes to the better view. Hegel twisted it to mean that any idea will also include contradictory idea. The debate between these two thesis and anti-thesis will lead to synthesis. Which will again lead to another cycle. Ultimately, it will lead to the truth. Here Kirati Jee may like to cite exactly which truths were recognized? Then the Hegelian idea was in fashion and Marx applied it to Materialism. Idiots, materialism is studied through observable and repeatable phenomena, not dialectics. Here Kirati Jee may like to cite exactly which truths of ‘materialism’ were recognized using dialectics? Further, Marxists jump from one nonsense to another and claim the ‘struggle between labor and capitalists.’ Only idiots relate the philosophy of ‘dialectic materialism’ with the economic ‘relation between labor and investors.’ The production \_ economy grows only when there is good relation, not struggle, between labor and investors. Here the freedom of the labor to work or not is inherent, and wage is decided by market, not investors. Is poor Nepalese labor running away to North Korea with no investors, or to South Korea with many investors? Is the objection to Maoism only theoretical or empirical? Let us study Mao’s application of the crazy theory in China. Millions were killed, died of starvation, and committed suicide. China went bankrupt. Mao caused death of 45 million in his ‘Great leap forward’, and another 15 million in his ‘Cultural revolution.’